Gar-qaadID: XAQIIQADA DHABTA AH IYO XAALADDA ISBAHEYSIGA (Asmara vs Jabuuti)
Naqdin ku Socota Caano-geel iyo C/waaxid
Mowduuca doodiisu taagan tahay iminka waa KOOXDA JABUUTI AYAA GAR LEH IYO KOOXDA ASMARA AYAA JID LEH, laakiin inta aanan go’aanka noocaasi ah ee ku dhisan RUNNA HA sheegin beenna ha sheegin aan dul yar guud sameeyo:
Isbaheysiga Asmara lagu dhisay waxaa ku kulmay Maxkamado (u sii kala baxa qaar aaminsan manhajka Ikhwaanul muslimiin ama la mida xarakaadka Xamaas, Ikhwaanul Muslimiinta Masar iwm, qaar kale oo ah salafiya jihaadiya iyo dad caadi ah oo kheyrka jecel) waxaa kaloo ku jiray qaar dhaanraac ah, Qeybta Baarlamaankii xorta ahaa la baxday iyo Qurba-joogta, marka guud ahaan loo fiiriyo isbaheysiga noocaasi ah iyadoo aan lagu daalin shaqsiyaadka ka midka ah way muuqatay in muddo aan dheereyn dhoobadaasi kala daadan doonto.
Ugu horeyntiiba waxaa iska beri yeelay xoogaggii Al-shabaab oo noqday koox gaar u taagan, qofkii aan ogeyn inay weligood gaar ahaayeen doodani kuma jiro, qofkii aan la socon inuu ajendahoodu yahay caalami oo Dal, Gobol iyo Qaaradba ay dhaafeen yaanu is daalin, qofkii inay isbaheysigaasi wax ku darsadaan ka sugayay ama hadda rajo ka qaba isna wax dhan baa doc marsane yaanu dibnaha furin.
Khilaafka ay ku kala irdhoobeen Sheekh Shariif Sh. Axmed iyo Sheekh Xasan Daahir mar haddii arrintoo dhami ku dul wareegeyso, sow uma baahna taxadar badan iyo in maqal islaamkii loo gar qaado ee aan degegtii la wada eeday maalin waliba dabada la sii heysan.
Ma garatay sababta Sheekh Shariif xuduudda Kenya looga gudbiyay kadibna magaalada Nairobi loo geeyay oo halkaas xiriirkiisa dibadda uga bilowday?.
Ma garaneysaa sababta Sheekh Xasan Daahir Doon uga qaaday Xarardheere uu Casab ku gaaray?.
Ma fahmi karaa sababta aamusisay Xasan Daahir afkiisuna juuqda u gabay ilaa ay xaajadu timid in go’aanno adag la qaato iyo heshiiskii Jabuuti?.
Ma garan weysay waxa keenay in Sheekh Shariif uga dhowaado xubnaha kale ee Isbaheysiga beesha caalamka siiba Mareykanka, Kenya, Qadar, Masar iyo kuwo kale?.
Ma ku wareertay in umadii kale oo aan kalaam oran ay afka buqsadeen Sheekh Yuusuf Indha Cadde iyo Sheekh Xasan Daahir..?
Ma la yaabtaa in Ina Ceydiid, Zakariye Sharif Salax, Jamac Cali ay wadaniyiin iyo mujaahidiin yihiin Sheekh Shariif iyo kooxdiisana ay Dhiiggii Shuhadada iibsadeen oo khiyaamo ku kaceen?!!!.
Ma qososhaa markaad aragto qurba joog Yurub iyo Waqooyiga America u qaxay kuna nool cayrta dadka Kirishtaanka canshuurtooda ka timaada oo haddana kuwa dhiiggooda iyo maalkooda huray ee safka dagaalka caddowga ku jira gar eexasho ku ridaya ama ijaafeynta oo ugu yaraan kala fogeyntooda ku howlan?!!!.
Waxaan ula jeedaa qofkii aan maanta xanuunka jira dawadiisa raadin ee haddana aqoonyahan, xog-ogaal ah sheeganaya.
Waxaan ula jeedaa ninka ushiisu u jaran tahay bushiga qeyb ka ah, xilliyadii dagaalada sokeeye iyo fowdadana saameyn ku yeesheen saa waa qasaare ku shoob aanay maankiisu ku jirin dan guud dal iyo dad.
Waxaan ula jeedaa nin taariikhda jihaadka iyo diblomaasiyadda la isku jilaafeeyo uga bilaabanto xilligii Jen. Ceydiid Xamar qeyb ka mida ka talinaayay een xitaa aan dib u meerin karin geedi socodkii dheeraa ee umadda Soomaaliyeed siduu Inj. Maxamed Cali Cibaar ugu iftiimiyay beydadkan:
Xalanihii xadgudub diidayee Xayle samirsiiyay
Waxaan ula jeedaa nin aan dhiraandhirin karin in Xamaas-ta Reer Falastiin ay xabad joojin (Hudna) la gashay Yuhuuda oo haddaba ka socota Daanta Galbeed ayna qeyb ka yihiin xoogagga ka sii xag jira Jihaad Al-islaami (sida Alshabaabka Soomaaliya).
Waxaan ula jeedaa Nin aan u kuur geli karin sida caalamku u shaqeeyo xilligan fircoonka Bush iyo xertiisa toodu ka socoto oo ka dhego la’ arrinta Iiraan iyo reer Galbeedka isku heystaan.
Waxaan ula jeedaa Nin aan qiyaasi karin inaysan ASMARA ahayn dhul Soomaaliyeed Afewerki-na ahayn boqorkii Xabasha ee Hijradii koowaad ee Islaamka Saxaabadu u hijroodeen, talow kooxda Asmara halkee ku danbeyn doonaa haddii Yuhuudu heshiis ka dhex dhaliso, Sow Afwerki kuma oran doono kooxda Asmara iyo Xasan Daahir sidii Jabhadii Sharqiga ee reer Suudaan aan idin heshiisiiyo C/llaahi Yuusuf.?!!
Intaas hoga-tusaaleyn iyo hal aan cadeynaayay haddaan uga gudbo labada dhinac maxay isku hayaan kuna kala duwan yihiin, maxaase kala heysta oo haddana isla haya aan guda galo:
KOOXDA ASMARA (Sheekh Xasan Daahir iyo Sakariye)
Waxay gar ku leeyihiin:
= Inuu cadaadis badan heysto oo qaarkood siiba Sheekh Xasan WANTED yahay suuragalna aanay ahayn inuu dhaqdhaqaaqo, taasoo khilaafka qeyb muhiim ah ku leh.
= Inaan lala socodsiin sidii loo baahnaa tallaabo kasta oo ku soo kororta dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ay u xil saarnaayeen labada Shariif iyo kooxdooda fulinta.
=- Iyo inaan markii ay qeyliyeen loo dulqaadan oo midnimada Isbaheysiga laga hor marin wax kasta.
Waxay ku khaldan yihiin:
= Inaysan go’aanada heshiiska la galay ku sugin Golaha Dhexe oo awood Labaabnimo ah ay adeegsadeen.
= Inay diidaan xal kasta oo aan ahayn xabbad.
= Inay aflagaado ka soo yeerto xubno waaweyn sida khiyaamo ay galeen laba Shariif iwm.
= Inay degdegaan ilaa ay xil ka qaadis sameeyeen iyagoon gaarin xadkii Salaad Jimco ku xirmi lahayd.
KOOXDA JABUUTI (Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan )
= Inay heshiisyo ku geli karaan kuna saxiixi karaan magaca Isbaheysiga.
= Inay raadiyaan wadiiqo kasta oo dalka looga xoreynayo Itoobiya
= Inay xilalkooda awoodda fulinta ku shaqeeyaan.
= Inay la-tashigii loo baahnaa la sameyn xubnaha ku haray Asmara
= Inaysan sugin inta laga keenayo Jabuuti xubnaha Asmara ama meel kale lagu kulansiin lahaa Gole dhexe oo inta Jabuuti fariisatay ka badan.
CULEYSKA LABADA DHINAC KALA HEYSTA:
Qof kasta arrimahan silsiladda ah inuu ka faalloodo raba iskama indha tiri karo cadaadiska labada dhinacba heysta, waana dhexdhexaadnimo biyo deys ah in dhinac kaliya culeyska la saaro iyadoo dhinaca kale indhaha laga duwanayo.
Waxaa culeys ku haya dowladda Ereteriya oo dalkeeda la joogo, hantideedana bixisa, yaanan laga abaal dhicin. Laakiin dantiisa Afewerki ayaa kala weyn tan Soomaaliya.
Culeys kale waa kan Mareykanka oo ugaarsanaya rag uu Xasan Daahir ka mid yahay.
Culeyska aan in badan la arki karinna waa kan ragga danaha dalalka kale u shaqeeya ee ku dhex jira isbaheysiga, raggaasi qaarkood kor ayay ku xusan yihiin oo uma baahna inaan ku soo celiyo, waxayna ku xiran yihiin mukhaabaraad shisheeye.
Waa yaabe sidee nin magaalada London musharax ka ah jihaadka Soomaaliya dadkii hormuudka uga ahaa u hor ordi karaa..!!?? sideese ninkii ku amray odayaasha beelaha reer Xamarka Muqdisho inay ciidamada Itoobiya xoolo loo qalo u keenaan, soona jeediyay in Soomaaliya lagu daro Itoobiya loo aamini karaa..!???. mise WAA ADDUUNYO UUR LAHAAN ARKAA EE UMULISAAN LOO ARKEYN..!!.
Waxaa culeys ku haya UN-ka, siiba ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Axmadu Wlad Cabdalla oo inta laga arkay daacad ka ah inay Soomaaliya dhibta ka baxdo ahna nin muslim ah oo Afrikaan ah.
Waxaa culeys ku haya Mareykanka oo musiibadeena mas’uuliyadda ugu weyn la saarayo, danaha Mareykanka haddii ay fahmi waayaan oo safiirka Nairobi ka kulankiisa qiime u arkaan waa meesheeda, rag laga fishase maaha.
Waxaa culeys ku haya dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan oo aan u adkeysan karin hal maalin oo xaaladda lagu jiro ay sii socoto, waana tan ka maqan Garabka Asmara ee raadinaya inay Itoobiya oo ooyeysa ka baxdo Soomaaliya iyo Meles oo leh: ha la I soo taago Maxkamadda caalamiga ah ee Hague.
Sheekh Xasan Daahir waxaa ka muuqata inuu qaadan waayay isagoo go’aanka ugu danbeeya lahaa inuu Sheekh Shariif ka sugo go’aanada waana khaladkii markii hore duruurfu keentay ee maxkamadaha ku dhismeen, haddii aysan taasi sharci iyo qaanuun urur ku shaqeeyo ahayn, Xasan Daahir gacan togaaleysigaas awoodeed ayaa la tegay AMAANO KUGU RAAGTAY INAAN LEEDAHAY AYAA LA MOODAA… shuuradii islaamka iyo qof qancise waa kala laba.
Sheekh Shariif markii uu ka baxay gacan gadaal ka baqeysa hore kama adeegato ayuu qiyaamihii ASMARA qumay waana maalintii uu Shariifka ka soo tegay Asmara ee uu xor u noqday go’aanada uu qaadanayo. Tusaale cad haddii aan ku siiyo.
Siyaasiyiinta Soomalida ama madaxdooda haddii aad rabto inaad fikirkooda dhabta ah hesho waxaa loo adeegsadaa Warbaahinta shisheeye, tusaalooyinka badan ayaana la heli karaa, waxaa halkan quseeya wareysi uu Sheekh Xasan Daahir siiyay Wargeyska afka carabiga uga soo baxa magaalada London ee Asharq Alwsat taariikhdu markay ahayd: 21-kii June 2008, cadadkeedii 10798 (Halkan ka akhriso wareysiga) .
wuxuuna ku sheegay inuu isaga xilka la wareegi doono oo booska Sheekh Shariif isugu geli doono..!! wuxuu sii raaciyay inuu tuhun ah inuu xiriirka ka dhaxeeya Sheekh Shariif iyo safiirka Mareykanka, isagoo caddeeyay in siyaasad ahaan ay is fureen isaga iyo Sheekh Shariif.
Kaaga sii darane arrintu maaha Wadahadal lama geli karo iyo mabda’ laga leexday laakiin waxaa la oran karaa waa khilaaf gebigiisba ku saleysan wadatashi la’aan ama haddii si kale loo yiraahdo xiriir la’aan shaqsiyaad, bal inta aan heshiiskii Jabuuti la isla gaarin oo qabanqaabadiisa socotay Bishii May ayuu Sheekh Xasan Daahir markii ugu horeysay sheegay inuu khilaaf ka dhex jiro Isbaheysiga isagoo caddeeyay inuusan ka horjeedin wadahadalka, oo wareega labaad ee Shirka Jabuuti ay ka qeyb geli doonaan (Halkan ka akhriso warkaasi) .
Qofkii xil isu magacaabidda Sheekh Xasan Daahir Aweys u arka mid ka dhalatay kadib heshiiska Sanca waa kaase runta ha arko ama ha ku dul wareego Asmaraa jid leh iyo Sheekha Xasan ayaan taageersanahay IN KAANA DAALIMAN OW MADLUUMAN.
Khaladka Sheekh Shariif wuxuu ku saleysan yahay farsamo iyo dadaal dheeraad ah oo kuwa qalbigoodu buuxo ka shakin karaan, waana mid lagu sifeyn karo aragtideyda INUU ABUURKII DUBAY ..! haddii heshiisku mira dhali waayo waxayse ahayd in fursad la siiyo ugu yaraan si loogu khalad xukmiyo ama loogu soo gole joojiyo.
Waa sax masiir umadeed mugdi laguma hoggaamiyo, laakiinse mugdi maaha siyaasad iyo diblomaasiyad ka shaqeynteed waxayna salka ku heysaa AKHAFU DARAREYN ama laba daran midkii daran in la dhaafo oo kan fudud la qaato in waaqica jira si xikmadeysan looga dhex dabaasho iyadoo la xeerinayo arrin aad isugu miliqsan (mucaqad ah) oo isugu jirta: Dal la heysto, Dad dhamaanaya iyo Duni aan kuu diir naxeyn.
Guuxii dadweynaha ee ku taliyay dhammaadkii 2006-da in Baydhaba la qabto oo mujaahidiintu ku geeraaraan maalin cad dowladdii Doofaarey laga soo dhoofiyayna Itoobiya loo tarxiilo isagoo aan eegin guuxa dunida kuna waaya aragnimo qaadan wixii Soomaaliya ka raacay soo celintii Goboladda maqan (oo laga bilaabay Somali Galbeed), la yaab maaha inuu maantana ku taliyo Garabka Jabuuti inay khaladeem ama xitaa gaalo-raacyo ku tilmaamo, laakiin sow wacdaraha adduunka laguma waano qaato?!.
Qurba jooggu sidaa uma wada sal fududa oo kuma wada ordaan sidii ay umaddan kala irdhowday qalinkooda ugu sii kala tuuri lahaayeen…. ee waxaa jira qaar badan oo danta umadda u taagan daneystase yeelkiis…
Kuwa iyagoo aqoon iyo adduunyo isku heysta halkan yimid ee naftoodii huray oo uu ugu danbeeyay Abdullahi Ali Afrah Asparo Allaha ka aqbalo shahaaddada keyd bay galeen, dhiigoodana dahab bay ku qoreen.
Kuwa hantidooda bixiya ee jihaadka shidaalka u ah waa tiir labaad oo umaddu abaal u heyso waajibaad dalkooda iyo diintoda ka saarana gudanaya.
Kuwa dadaalka ku jira ee labada dhinac aan ka quusan Soomaalinimo, karti iyo dadnimana isku darsaday aanba ka tilmaamee Prof. Ibraahim Xasan Adow iyo saaxibaadiis faraha badan bulshadu beerka ayay ka ogsoon tahay.
Kuwa niyadda ka jecel Soomaali oo midowda iyo dalkoo xorooba waa iimaanka ugu yar.
Dhinaca kale :
Kuwa safka dagaalka ku jira ee qadiyadooda darteed loo dilay magacood ha jiro waxaan duco ahayn ma mudna.
Kuwa weli safka ku jira ee is qadimay hoggaan iyo jundi waxaan taageero ahayn ama dhinac gal xaq uma laha.
Kuwa hoggaanka wada hayay ee is khilaafay aragti ama adduunyo waxaan nasteexo ahayn iyo sulux uma qaadmaan.
Kuwa Gumeysiga ka dhiidhiyay ee halkii ay Golaha Baydhaba dhex fadhin lahaayeen kuna sugi lahaayeen sanuudda UNDP ka door biday inay wadaniyad muujiyaan waa mahadsan yihiin.
Kuwa TFG-da ugu jira inay dhibkeeda iyo sharteeda umadda ka yareeyaan (Nuur Cadde, Axmed C/salaan iyo saaxiibadood), dadka qaarkood murtadiinba ha ku sheegaane iyaguna rijaal iga dheh.
Intaas wixii ka soo haray ee u taagan inay rajadii umadda iyo iftiinkii ay sugayeen tashwiish ku abuuraan oo qalinkooda gar eexeed iyo gardarro ku qeybiyaan waxaan leenahay: AAMUSA INTA IKHYAARTU WADA HADLEYSO… WAR AAMUSA INTA AHLU XALI WAL CAQDIGA ISLAAX RAADINAYAAN, AFKIINA HEYSTA INTA DHIIGU SOCDO EE XORIYADDA AAKAHA LAGU RAADINAYO, QALINKIIGU KHADKA HAKA DHAMMAADO INTA KHILAAFKU JIRO KHEYR KALE IDINKA WEYNAYE.
Haddaad aqbashaan oo is daba qabataan waa kheyr, haddii kale FA’IN CUDTUM CUDNAA.
Saadaal iyo gabagabo
Saadaashu inay guul noqoto ku wanaagsanaan lahaydaa C/qaasim Salaad ayaa markii doorashadii Kasarani looga helay ee C/llaahi madaxweyne loo doortay kuna qasbanaaday inuu aqoonsado Muqdisho ku soo laabto, shir jaraa’id oo taariikhda galay ayuu qabtay isagoo wixii ka dhacay Kenya oo dhan eeda saaray hogaamiye kooxeedyadii beeshiisa Hawiye, waxaana laga hayaa: NIN BAA BERI LAGA GEERI ISMA IMA HESHEENE CUDUR BAA II NUGLEEYAY, oo uu ula jeeday C/laahi kursi madaxweyne ma heleene qabqablayaashan ayaa ii gacan qabtay.
Muqaawadada Gudaha ilaa hadda waa 4 qeybood:
Al-shabaab oo horeba uga baxay maxaakiimta
Maxkamadaha oo laba talis ah
Jabhataul Islaami fi Soomaal
Fikirka inta xoreynta dalka ku wada dhawaaqday kala qabaan isna waa afar:
Jihaad ka dhan ah Gaalo iyo Gaalo-raac (murtad), haddii ay gaalo (Itoobiyaan ilaa Mareykan) baxdo camiilkeedii waa la sifeyn oo dagaal joogsan mayo.
Jihaad ka dhan ah Gaalada dalka qabsatay (Itoobiya), haddii Itoobiya baxdo Soomaalidu waa wallaalo waana heshiin karaan, wadahadalna waa loo baahan yahay.
Jihaad lagu qaado Itoobiyaanka iyo wadahadal waa inay is barbar socdaan.
Dagaalku waa inuu socdaa wadahadalka haddii aan aniga hormuud ka ahayn ama aanan hageyn qeykey ma wadi karo.
Inta dadaalka heshiisiinta madaxda is qabsatay socdo wallow Xasan Daahir rajo xal loo helo khilaafka kooxda Jabuuti kala dhaxeeya meesha ka saaray (Wareysi uu siiyay Idaacadaha Muqdisho 27-kii July 08 oo uu ku yiri: “Siday u baxeen waaye maba soo noqon karaan” ) waxaa mihiim ah in kheyrka dhinaciisa la saadaaaliyo maxaa yeelay iyadoo intaas oo aragti kala duwanaansho ah jirto ayaa haddana la yeelan karaa talo guud iyo mowqif laga mideysan yahay oo loo wada halgamo.
Rajooyinkaas haddii ay guuleysan waayaan Alle ma qadaree, markaas waxay noqon doontaa KULLU MAQAAM LAHU MAQAAL.